प्रश्नहरूको घेरामा प्रगतिशीलता ! को प्रतिशील, को अप्रगतिशील ? - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical online media
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७५, बिहीबार
अन्त्यमा भनूँ – गीतलाई गीतको कोटिमा राखौँ र अब गीतको पुरानो परिभाषा फेरेर सचेत बनौँ । कलाको नयाँ इतिहास बनाउने यो नयाँ चरणमा सामुहिकताबोध गरौँ । पार्टीको प्रचार होइन, गीतसङ्गीतको मूल्य बढाऔँ । नेपाली कला÷साहित्य÷संस्कृतिको विविधता देशकै विविधताजस्तै छ । विषय, शिल्प र शैलीको विविधता र मधुरतालाई नयाँ कोणबाट परिभाषा गरौँ र नयाँ युगलाई नयाँ सोच र शैलीले सम्मान गरौँ, स्वागत गरौँ ।
२०७५ असोज ४
साभारः सातौं म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्ड स्मारिका